Ismaaciil Cumar Geelle oo markii shanaad ku guuleystay madaxtinimada Jabuuti – WARSOOR
Ismaaciil Cumar Geelle oo markii shanaad ku guuleystay madaxtinimada Jabuuti
DJIBOUTI – (WARSOOR) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii shanaad ku guuleysatay madaxtinimada wadankaas, kaddib markii uu helay 98.41% codadkii dadweynaha reer Jabuuti doorashadii shalay.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Jabuuti Muumin Axmed Sheekh ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadan sida uu soo sheegayo wariyaha VOA Ramadan Muuse oo ku suga xarunta ugu weyn ee tirinta codadka ee magaalada Jabuuti.
Hadal kooban oo uu shalay jeediyay Madaxweyne Geelle, kaddib markii uu dhiibtay codkiisa ayuu sheegay inay doorashadu ay si nabad ah ku dhacday, isla markaana uu sugayo natiijada doorashada.
Madaxweyne Geelle, waxaa la tartamay ganacasade Zakariye Ismaaciil Faarax oo 57-jir ah, wuxuuna helay 1.59% tirada guud ee doorashadan. Zakariye oo ah shakhsi ku cusub siyaasadda Jabuuti ayaa musharraxnimadiisa baraha bulshada ku shaaciyay bishii Janaayo ee sanadkan.
Fadliga Bisha Barakaysan ee Ramadaan